Abia na imepụta ebe mkpocha ohuru, nke kachasi, ma nwekwaa mkpebi mbu ị g’eme bu ma ulo mkpocha gi a gha’’oru ma o bu omenala. Enwere uru na njedebe na nhọrọ ndị a ọ bụla, ọ nwere ike isi ike ikpebi nhọrọ ziri ezi maka ngwa nhicha gị. Nke a bụ ihe anyị ga-ahụ na ụlọ ọrụ ntanetị dị ọcha na nke ọdịnala.
Mgbidi ụlọ dị ọcha na n'uko usoro a na-agụnye a sandwichi panel ewu na ihe aluminum n'ụgbụgbọ mmanụ a coreụ isi n'etiti galvanized ígwè elu Ibé akwụkwọ. A na-ejikarị ihu mkpuchi dị ọcha mechie ihu ihu ndị a na-ekpuchi gburugburu ebe obibi dị ọcha dịka PVC ma jikọta ya ọnụ maka ikuku ikuku ikuku.
Ogwe Module Uru:
1.Panels na-iji interlock n'oge echichi ike a kpamkpam mechiri emechi gburugburu ebe obibi na nnọọ nta ikuku leakage / infiltration.
2.Field agwụcha adịghị achọrọ. Enweghị njikọ sanding, priming ma ọ bụ eserese.
3.Wall system base na-enyekarị nkwado siri ike maka ntọala ala dị mkpa, na-abụkarị ebe na-esighi ike na nzukọ mgbidi.
4.Walk-na ụlọ sistemụ nwere ike ịmepụta oghere interstitial n'elu ebe a na-emepụta nke na-ebelata ihe ndị chọrọ nkwụsị n'oge mmezi oge niile.
5.Ọtụtụ usoro nhicha nke usoro dị iche iche na-enye ma ọ bụ nwere ike iwekọta ọnụ ụzọ ụlọ dị ọcha na nchekwa ngwaike na nhazi mpaghara. Ọnụ ụzọ na-egosi na saịtị etinyere maka ntinye.
Ogwe Modular Module:
1.Bịa nnukwu ego n'isi maka mgbidi na usoro sistemụ.
2. Ogologo oge-oge maka oge imewe, ịgha ụgha na ihe okike zuru ezu.
3. Ogwe akụkụ dị iche iche anaghị agbanwe agbanwe maka mgbanwe / mgbanwe mpaghara.
4.Iwuwu ụlọ agha aghaghi ibu oke ibu ibu nke ije ije n’elu ulo.
Ngwongwo ihe eji eme ihe na mgbidi site na mgbidi dika gypsum ma obu fiberglass mejuputara ma tinye ya na saiti. A na-atụle ọla kọpa, bepụ, kwado ya ma kechie ya ebe ejiri nsonaazụ mgbidi, ihe njikọta, na ọtụtụ mkpuchi agba ma ọ bụ mgbakwunye agbakwunye. Enwere ike ịkwụsị ụlọ elu na-enweghị atụ n'ọnọdụ nke ụdị ụdị mgbidi ahụ, nke nwere usoro grid nke aluminom na taịl nile nke ihe dịgasị iche.
Metal Stud Uru:
1.Lower n'ihu ego maka ego maka ihe ndị ahụ.
2.Materials na-ahụkarị ngwa ngwa maka nnyefe na saịtị ahụ.
3.Field mgbanwe / mgbanwe nwere ike na-emekarị n'otu ebe mfe na ngwa ngwa.
4.E nwere ezigbo omuma ihe omuma banyere uzo na uzo eji aru oru n’etiti otutu ndi oru.
Ogwe osisi metal:
1.Project quality ga-adabere n'ụzọ ka ukwuu n'ihe ka n'ọhịa na-emepụta karịa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-achịkwa.
2.Pap-based gypsum board nwere ikike ibu ero ero dika ebu.
3. orkrụ ọrụ na mbadamba mbadamba mgbidi na-emepụta ihe dị iche iche nke nwere ike ịkwaga n'ime usoro usoro ihe nhịahụ n'oge nrụnye.
4.Harsh cleanroom nhicha Chemicals nwere ike imebi mgbidi mbadamba enweghị ezigbo nchebe na anya.
Site na nnweta usoro sistemụ modular, a na-ebelata ọtụtụ nsogbu ndị metụtara usoro ọdịnala ọdịnala. Ka ụlọ ọrụ ahụ na-emegharị ọtụtụ ọrụ usoro na usoro dị iche iche, otu a ka ọrụ ụlọ ga-esi mepee usoro nke usoro ihe nhicha, ụzọ dị mfe iji wuo ụlọ mkpocha.
Emebewo ma mepụta ụlọ ọrụ ihe eji eme ihe site na iji ihe na usoro usoro ọdịnala. Kemgbe ọtụtụ afọ, Airwoods ahụla na mmụba nke ojiji nke ụlọ ọrụ dị ọcha n'ọtụtụ akụkụ ọrụ gụnyere ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nlekọta ahụike, ngwaọrụ ahụike, na ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ agbanweela ka ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu nwere atụmanya nke ịdị ọcha dị elu, nnweta na visibiliti n'ime ụlọ ọrụ gị yana nghọta ka mma banyere gburugburu ebe ewuru ewu chọrọ ka ị na-agba osisi na-eduga.
Ọ bụrụ na ọrụ gị gụnyere ọhụụ nke ndị na-achịkwa ma ọ bụ ndị ahịa oge niile, ọ ga-adị mkpa ka ọ bụrụ mgbanwe maka nhazi ndị ọzọ n'ọdịnihu, ma ọ bụ bụrụ nke edoziri ka ọ bụrụ etiti maka ịdị mma maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngalaba gị, wee mejuputa sistemụ ụlọ dị ọcha dị mma iji gboo mkpa nke oru ngo gi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịkpọtụrụ Airwoods taa! Anyị bụ ụlọ ahịa nkwụsị gị ka ị nweta ihe nhicha zuru oke zuru oke. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ike ime ụlọ anyị dị ọcha ma ọ bụ iji soro ndị ọkachamara anyị kwurịtara nkọwa gị banyere ụlọ mposi, kpọtụrụ anyị ma ọ bụ rịọ maka nkwuputa taa.
Post oge: Jan-22-2021